Mashandisiro ekushandisa nekamuri | Ota Ward Hall Aplico
<Chenjedzo> Kumakamuri akaratidzirwa ne *, iyo lottery nzira yashandurwa kudzivirira hutachiona hutsva hwecoronavirus.
Lottery nzira Daejeon Citizen's Plaza Tora chikamu mune rotari muhoro diki.
* Iyo lottery nzvimbo ichave Ota Citizen's Plaza.
Ota Ward Hall Aplico, kwete imwe nzvimboNdokumbira utarise kuti zvichave.
Nguva yekushandisa nzira Kugamuchirwa kunogamuchirwa kuOta Ward Plaza Diki Horo kubva 1:20 pm kusvika 2:XNUMX pm pazuva rejotari.
(Lottery inotanga na2: XNUMX pm) Kugamuchirwa kunogamuchirwa kuOta Ward Plaza Diki Horo kubva 9:20 am kusvika 10:XNUMX am pazuva rejotari.
(Lottery inotanga na10 am) Kubva 4th kusvika kupera kwemwedzi, mwedzi mina pamberi pemwedzi wekushandisa, nyorera paUguisu Net, Ota Ward Hall Aplico, kana iyo window yemusangano weOta Ward.
Kushandisa kunyorera / kubhadhara nguva yekupedzisira Kubva pazuva rejotari kusvika musi wa20 wemwedzi mumwe chete
Kunyorera nzvimbo yekugamuchira / nguva yekugamuchira Ota Ward Horo Aplico
(Zuva rega rega kunze kwemazuva akavharwa) ・ Ota Ward Horo Aplico
9:7 am kusvika XNUMX:XNUMX pm (zuva rega rega kunze kwemazuva akavharwa)
・ Nzvimbo yega yega muwadhi: 9:7 am kusvika XNUMX:XNUMX pm
Kushandisa kunyorera / kubhadhara nguva yekupedzisira Ndokumbirawo mubhadhare panguva yekunyorera. 1. Kana iwe wakanyorera paUguisu Net, ndokumbira ubhadhare mukati memazuva gumi nemana kubva pazuva rekushandisa.
2. Kana iwe wakanyorera pakaunda, ndokumbira ubhadhare panguva yekunyorera. * Kana iwe ukanyorera kubva pamazuva maviri zuva rekushandisa risati rasvika, Ota Ward Hall Aplico chete ndiyo ichave iripo.